Fihenam-bidy PSZ Series Famoronana milina famolavolana sy famokarana | XiongYe
1. Rafitra fanaraha-maso:
Ny masinina dia ampifandraisina amin'ireo singa elektronika mandroso iraisampirenena miaraka amin'ny PLC Programmable Logic Controller (Alemana, Siemens) ary fampirantiana efijery sinoa. Miaraka amin'ny rafi-piarovan-tena sy fanairana maro, dia mora ampiasaina mba hanatanterahana famokarana mandeha ho azy avy amin'ny famahanana, ny fifehezana ny mari-pana, ny sakafo, ny fanerena sns.
Izy io dia miasa amin'ny fomba roa: ny fahanana ara-dalàna sy ny famahanana tsindry ny fitaovana, ary ny maody roa dia azo ovaina ho toy ny firafitra sy ny endrik'ilay lasitra. Tsy voatery atao amin'ny fomba mandeha ho azy sy mandeha ho azy feno.
Ny masinina dia miaraka amin'ny valizy mandanjalanja mba hiantohana ny setroka sy ny maripana ary tsy hanjifa ny setroka.
4. Rafitra herinaratra:
Ny masinina dia tarihan'ny tsindry hydraulic miaraka amina rafitra miovaova haingana / miadana mba hiantohana ny fotoana marina amin'ny famohana sy famaranana ny bobongolo ao anatin'ny fotoana ekonomika sy fiasa milamina.
5.Vacuum System (tsy voatery)
Ny masinina dia miaraka amin'ny rafitra banga tsara indrindra hanafainganana ny famokarana hafainganana ny vokatra, hanafohezana ny fotoana mangatsiaka ary hampihenana ny atin'ny rano vokatra.
6. tombontsoa hafa:
Ny milina dia afaka mandeha ho azy sy mahomby amin'ny fanatanterahana ny fanamainana, ny fampangatsiahana, ny famahanana ary ny fikolokoloana ny ingot mba hifanaraka amin'ny vokatra EPS samihafa. Ny fomba fanafanana isan-karazany dia azo ampiasaina amin'ny fomba tsy voafidy isaky ny endrika vokatra mba hiantohana ny kalitaon'ny vokatra. Ny rafitra banga sy tsindry ratsy dia afaka miantoka ny haben'ny rano ambany, ny famolavolana haingana ary ny fotoana fanamainana fohy (na tsy misy fanamainana).
zavatra Unit \_ Model PSZ120 PSZ140 PSZ175 PSZ2000
Haben'ny bobongolo MG 1200 × 1000 1400 × 1200 1750 × 1450 2000 × 1600
Vokatra vita vita MG 1080x900x330 1320x1090x330 1600x1290x330 1750x1400x330
Ny halaviran'ny fanokafana bobongolo MG 1400 1620 1620 1620
Fanjifana etona kilao / tsingerin'ny 7 9 10 11
Fanjifana rivotra mangatsiaka kilao / tsingerin'ny 45-138 50-150 60-190 65-200
Fanjifana an'habakabaka voafintina m³ / tsingerina 1.5 1.8 2 2.2
Vacuum Pump Air Suction habetsany m³ / h 165 230 280 280
Kitapo famokarana seg 60-150 60-150 60-150 60-150
Hery napetraka KW 9.1 12.1 14.1 14.1
Lafiny ivelany MG 4600x1850x3300 5000x2050x3700 5000x2400x4000 5000x2650x4150
Ny lanja napetraka kg 3200 4300 4850 5300
Previous: Masinina mamorona karazana semi-mandeha ho azy
Manaraka: Masinina tontonana mihetsika mandeha ho azy feno